Namono tena marina sa? Ahiana ho nitifi-tena tao an-tranony Rakotoarivelo Mamy | NewsMada
Namono tena marina sa? Ahiana ho nitifi-tena tao an-tranony Rakotoarivelo Mamy
Misaona ny tontolo politika. Ahina ho maty nitifi-tena tao an-tokantranony, tetsy Ankadifotsy, omaly, Rakotoarivelo Mamy. Efa nosoratany tao amin’ny tambajotra sosialiny (FB) ny olana nosedrainy ary anisan’ny antony mety ho nandraisany izao fanapahan-kevitra izao izany. Naheno poa-basy indroa tao an’efitrano fatoriany ny mpanampiny tao an-trano ary niditra tao an’efitranony ary nahita azy efa maty mihosin-dra eo am-pandriana, tokony ho tamin’ny 11 ora. Niantso ny polisy misahana ny heloka bevava avy hatrany ilay mpanampiny taorian’izany. Tonga nanao fitsirihana ny razana teny an-toerana ny polisy siantifika, ny polisy misahana ny heloka bevava, ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahatelo eo Antaninandro. “Naheno feom-basy indroa izy raha ny filazan’ny mpanampiny ka niditra nijery tao amin’ny efitrano nisy an’i Mamy Rakotoarivelo ka izy efa maty no hitany. Nisy basy PA hita tao ary efa manomboka ny famotorana. Efa vita avokoa ny fitsirihana tao amin’ny toerana nisy ny razana. Nalefa any amin’ny tranom-patin’ny hopitaly HJRA izy anaovana “autopsie”, ahafantarana ny marina ”, hoy ny kaomisera Rakotondrasoa Jean de Matha. Nohamafisiny hatrany fa nentina hohenoina any amin’ny polisy misahana ny heloka bevava momba ny zava-niseho tao an-trano ilay mpanampy vavy. Nahitana diam-bala teo amin’ny lohany nandritra ny fitsirihana nataon’ny polisy.
Fantatra kosa fa efa intelo nikasa hamono tena izy. Mety ho nahatonga azy namono tena ny olana momba ny fiainany manokana sy ny fisarahany tamin’ny vadiny teo aloha ary ny resa-bola tamin’ilay tovovavy niarahany farany. Manaporofo izany rahateo ny fisian’ny hafatra nosoratany mitantara izany ary naparitany any anaty FB mialoha ny nahafatesany. Namela kamboty mirahalahy, any am-pitan-dranomasina, Rakotoarivelo Mamy.
Mpanao politika feno sy olon’ny fiaraha-monina
Tsiahivina fa efa nisahana andraikitra maro teto amin’ny firenena izy. Efa minisitry ny Fifandraisaina ny taona 2002. Efa depioten’i Madagasikara. Lehiben’ny delegasion’ny ankolafy Ravalomanana tamin’ny famahana ny krizin’ny 2009, nisolo ny toeran-dRakoto Andrianirina Fetison. Filohan’ny kongresin’ny Tetezamita (CT), ary mbola nitaky hatrany ny zo sy ny tombontsoany, amin’ny maha lehiben’ny andrimpanjakana azy izy, fony fahavelony. Filoha tale jeneralin’ny MBS, nialoha ny nialany tsy ho mpikambana Tim intsony. Na izany aza, mbola niara-nanamarika ny faha-15 taon’ny Tim tetsy amin’ny Carlton Anosy ny tenany ny 8 jolay teo.
Ankoatra izany, efa naiditra am-ponja noho ny resaka baomba tetsy Masay, voalaza fa nifofoana ny ain-dRajoelina ny tenany ny taona ny marsa 2011. Navoakan’ny fitondrana Tetezamita ihany anefa rehefa nandeha ny tsindrin’i Frantsa. Nitarika vahoaka an-dalambe koa ny tenany niaraka amin’ny ankolafy telo, Ravalomanana sy Zafy ary Ratsiraka ny aogositra 2013, nitsipaka ny fitondrana Tetezamita.
Etsy andaniny, fanaony isan-taona ny manolotra fanomezana ireo zokiolona sy sahirana etsy amin’ny boriborintany III rehefa 26 jona na ny taona vaovao.
Jean Claude sy Synèse